साहित्य | Everest Times UK | Page 9
लानूमाको प्रेम कहानी
जानु काम्वाङ लानूमा केही महिनायता फेसबुक र इन्टरनेटमा अत्यन्तै व्यस्त छिन् । इन्टरनेटको चाटरुममा एक अत्यन्तै मिलनसार, दयालु, आपूmले रोजेजस्तै मन मिल्ने साथी भेटेकी छिन् लानूमाले । नेटमा भेटे...	Read more
विश्व नेपाली साहित्य सम्मेलनको आयोजक समिति विस्तार
लन्डन । विश्व नेपाली साहित्य महासंघ, विश्व केन्द्रीय समितिको नियमित बैठकले आयोजक तथा व्यवस्थापन समिति विस्तार गरी ५७ सदस्यीय बनाएको छ । गत जून २८ तारिखमा बसेको बैठकले केन्द्रीय सचिव केदार सु...	Read more
चिम्खोले काइँला काले, गोरे र एसियनमूलका पुरुषको लिंग हेर्छिन् । किनेर ल्याउँछिन् । निरुताले त्यही कृत्रिम लिंग प्रयोग गरेर आनन्द लिन थालेकी छन् । पल्टन सरेपछि निरुतालाई लिएर निर्मल पनि युके...	Read more
चिम्खोले काइँला निर्मलले निरुताको चिट्ठी दोहोर्‍याइतेहर्‍याइ पढ्यो । उसले कुरा बल्ल बुझ्यो, निरुता यति नजिक किन भइरहेकी छन् । बारम्बार निरुताले किन उसलाई बोलाइरहन्छ । सबै बुझेपछि उसको शरीरमा...	Read more
चिमखोले काइँला तिनै नातेदारले फुलमतीको परिवारलाई आश्रय मात्र दिएन, उनीहरूले पाउने सुविधा पनि पाउनेगरी बन्दोबस्त गरिदिए । फुलमती र परिवारको खुसीका दिनहरू सुरु भयो । फुलमतीले अर्को सन्तानको पन...	Read more
चिम्खोले काइँला केही कुरामा कमी हुन दिइनन् । गाउँघरको चाडपर्वमा सुनमती दिदीको गहना लगाउँथिन् । उनी दुरुस्तै जुनमती जस्ती देखिन्थिन् । यसले गर्जमानको बहकिएको मनमा थोरै भए पनि मलमपट्टी लगाउने...	Read more
दुत पुन (चिम्खोले काइँला) बेलायतको हिउँद, लामो र चिसो अँधेरी रात । फुलमती चाँडै ओछ्यानमा गए पनि निदाउन सकेकी छैनन् । उनका चार लालाबाला भुस निद्रामा छन् । फुलमतीले निदाउने हरप्रयास गरिन् । तर...	Read more
छेपारोको कथा र मेरो मे डे !
सबेरै उठी सम्पूर्ण नित्यकर्म सकी सधैंझैं बाटो लगियो । एक गिलास तातोपानी नियमित पिउने बानी परेकोले पिउँदा पिउँदै ढिलो भो । भित्ताको घडी हेर्न भुलेर हतार तलामुनी झरेकोले खुट्टामा जुत्ता घुसार्...	Read more
वातावरण साहित्यमा एउटा कोसेढुङ्गा
नारायण गाउँले साहित्यमा प्रकृतिचित्रण र मोह नौलो होइन । वैदिक अर्ध साहित्यिक रचनादेखि ग्रिसेली र रोम साहित्यहरूमा प्रकृति र वातावरणको कथ्यकै रूपमा समेत सघन उपस्थिति छ । विश्वको आदिम कृति ऋग्...	Read more
चिम्खोले काइँला मान्छेको जिन्दगी एकनासको कहाँ हुन्छ र ? कसैले जिन्दगीमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म दुःख र कष्ट झेल्नुपर्ने हुन्छ । कसैको हाँसीखुसी जिन्दगीमा भयानक विपत्ति आइपर्छ । कसैको जिन्दगी सुर...	Read more